साँच्ची सकिन्न र ?
मेरा सामु सिङो आकाश छ
तर विना प्वांख को पंक्षी भएको छु
सप्त रङी ईन्द्रेणी तैरिन्छ आँखा भरी
रङहिन देखिन्छ ईन्द्रेणी पनि तिमी विना
के यही माया हो ? के यही समर्पण हो ?
लाग्दैन् मलाई यो माया हो भनेर
तिमी माथि को निर्भरता हो
या,तिमी प्रती को लगाव होला
प्रेम त् निस्वार्थ हुन्छ भन्थ्यौ
हावा झै शर्वब्यापी हुन्छ भन्थ्यौ
खै त यसको ब्यापकता ?
मेरो प्रेम तिमीलाई स्वार्थी लाग्यो
ल! भैगो ,विवाद गर्दिन मँ
प्रेम को वदलामा प्रेम खोज्नु स्वार्थ हुन्छ र् ?
के राधा-कृष्ण को प्रेम मात्रै सच्चा हो त ?
अब यो प्रेम कै परिभाषा फेर्ने बेला भए छ
लैला मँजनु ,हिर रांझा को प्रेम लाई स्वार्थी ठान्छौ तिमी ?
के आत्मा लाई शरीर भित्र लुकाउन खोज्नु स्वार्थ ठहरिन्छ ?
परेवा का जोडी झै, चांद चखेवा झै
एक विना अर्को को कुनै अस्तित्व हुन्न भन्छौ
मैले त् परेवा ले एउटा मात्रै बच्चा हुर्काएको पनि देखेको छु
खै त अरु झै जोडी जोडी भएर जन्मिएन त्यो
के मँ पनि त्यस्तै अपवाद हुँ त् तिम्रो नजर मा ?
के मँ पनि अधुरो हुँ त् तिमी विना
लाग्दो हो तिमी लाई ,
मलाई एक्लो पार्न जन्मिएकी हौ तिमी
मँ बाट टाढा जान नजिकिएकी हौ तिमी
तर तिमीले गलत सोची रहेकी छौ
तिमी विना पनि बांचेर देखाइ दिन्छु मँ
खुशी,उमंग उत्साह विना पनि त् बांच्न सकिन्छ नि हैन र?
मर्न नसकेर पनि त बांचिन्छ
एउटा प्रयोग कै लागि पनि त् बांच्न सकिन्न होला र ?
- प्रयास , फ्र्यान्कफर्ट , जर्मनी
मायामा सात रंगहै हजारौ रंग देखिन्छ। सातै रंग देखिएर माया भयो कि भनेर सोच्नु गलत छ हे। पढ्दै जादा कता कता अपरिभाषित हुन कि अनुभवहरु जस्तो लाग्छ। तर अन्त्य तिर चाहिँ अलिक खुले आयो..जस्तै तिमी विना पनि बांचेर देखाइ दिन्छु मँ
तर म यो कुरामा सापेक्ष रहनै सक्दिन् कसैको प्रमाणको लागि प्रयोग बन्न सक्दिन्। म निरपेक्ष आफ्नै र आफै हू... कसैका लागि कतै हैन...
बकबास , गन्थन ....
सिंग न के हो भन्या जस्तो लाग्यो मलाई